जानकारी Archives - Page3of 32 - कृषि पत्रिका
सरोज दाहाल शनिबार १० जेठ, २०७७
एयर लेयरिङ अथवा गुटि भन्नाले वनस्पतिक प्रजननको एउटा यस्तो तरिका हो जहा वोटहरुको हागामा नै जरा उत्पादन गरिन्छ । यो विधि लिचि ,अम्बा र अमिलो जातका फलफलहर जस्तै कागती,निबुवाहरमा उपयक्त हन्छ तर बिशेष गरेर लिचिमा यसको सफलता र लोकप्रियता धेरै रहेको छ । यसको लागि उपयक्त महिना भनेको जेष्ठ अषाढ हो । कसरि गर्न सकिन्छ […]
मङ्गलबार ०४ चैत, २०७६
कुरिलो एक बहुवर्षीय तरकारी बाली हो । यसको खेती न्यानो र समशितोष्ण हावापानी भएको खासगरी मध्य पहाडी क्षेत्रमा सफलतासाथ गर्न सकिने भएको हुँदा मध्य पहाडी क्षेत्रको सामुदायीक बन, निजी बन तथा कृषकले आफनो पाखा पखेराहरूमा व्यावसायिक रुपमा कुरीलो खेती गरी अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने राम्रो देखिएको छ । यो कलिलो टुसा को लागि खेती गरिन्छ […]
महेश्वर लामिछाने शनिबार १८ माघ, २०७६
किवीको व्यवसायिक खेतीका लागि उयुक्त हावापानी समुद्र सतहबाट १००० देखि २००० मिटरसम्मको उचाइ हो । तथापि उचित सिँचाइ र स्याहार सुसार पुगे समुद्री सतहबाट ८०० देखि २९०० मिटरसम्म यसको खेती गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । प्राकृतिक रुपमा १६०० देखि २५०० मिटरसम्मको नेपालको पहाडी जंगलमा किवी पाइन्छ । हिउँद र सक्खा गर्मी मौसममा किवीलाई सिंचाइको आवश्यक […]
गोबर भएको ठाउँमा उम्रने भएकाले च्याउको यो प्रजातिलाई गोब्रे च्याउ भनिएको हो । यो च्याउ चिसो हावापानि भएको ठाउँमा उम्रने भएकाले यसलाई पहाड, उपत्यका वा तराईमा मौसम अनुसार खेती गर्न सकिन्छ । हुन त बतानुकुलित कोठाहरुमा पनि यसको खेती बाह्रै महिना गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि नेपाली लगानी धेरै गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा अहिले सम्म […]
शुक्रबार ०३ माघ, २०७६
अदुवा एक वर्षीय नगदे तथा मसला बाली हो । यो बाली ७ देखि ९ महिनामा तयार हुन्छ । यसको गानो माटोमुनी रहन्छ । यसको गानो लाई मसलाको रूपमा तरकारी, अचार आदिमा स्वाद बढाउने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ । अदुवाले मानव शरीरमा रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमता वृद्धि गराइ शरीर स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्दछ । अदुवा दम, खोकी, […]
ड्रागन फू्रट अर्थात सिउँडी प्रजातीको फल हो । यसको उत्पत्ती दक्षिण अमेरिकाको मेक्सीकोमा भएको पाईन्छ । दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरु भियतनाम फिलिपीन्स थाईल्याड लगायतको देश हुदै अहिले यो फल नेपालमा भित्रीएको छ । नेपालको लागि नौल फलको रुपमा रहेको यो ड्रागन फल २०५७ सालमा पशु चिकित्सक डाक्टर जगन्नाथ राईले अमेरिकी इन्जिनियर साथी मार्फत भियतनामबाट नेपाल […]
शनिबार २१ मङि्सर, २०७६
रामतोरीया एक प्रकारको तरकारी हो । भिण्डी उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रको तरकारी वाली हो । यस समूहका वालीहरुलाई गर्मी आदर्ता हावापानी र घाम लाग्ने मौसमको आवश्यकता पर्दछ । यसले तुषारो विल्कुलै सहन सक्तैन । यसको वोटको वृद्धि, फुल्ने तथा फल्नको लागि २५–३० डि. से. तापक्रम उपयुक्त मानिन्छ । १. भिण्डी फल सकेसम्म ताजामै प्रयोग गर्नु […]
आइतबार ०१ मङि्सर, २०७६
नेपालमा विभिन्न जातका खूर्सानीहरु पाइन्छ । त्यसमध्ये सोलेनेसी कुलको तरकारी हो खुर्सानी । प्राकृतिक रूपमा यो मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा पाइन्छ । ब्राजिललाई यसको उत्पत्ति स्थल मानिन्छ । यो बोलिभिया, इक्वेडोर र पेरुको मूल फल हो । खुर्सानी अन्तर्गत मीठो र पिरो प्रकारका खुर्सानी आउँदछन् । नेपालमा पिरोलाई खुर्सानी र मिठोलाई भेडेखुर्सानी भन्ने गरिन्छ । […]
शनिबार ०९ कार्तिक, २०७६
नाइल टिलापिया न्यानो पानीमा पाइने तथा अर्धसघन र सघन दुवै पद्धतिमा पालन गर्न सकिने एक प्रसिद्ध प्रजातिको माछा हो । यो एक सर्वहारा माछा हो जसले पोखरीमा भएका विभिन्न प्रकारका आहाराको साथै तयारी दाना राम्रो संग खान्छ । टिलापीया माछा पालनको विभिन्न पद्धतिहरु मध्य निम्न पद्धतीहरु कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले सफल विकास गरिसकेको छ […]
शुक्रबार ०८ कार्तिक, २०७६
सुकमेल तेस्रो महँगो मसला हो । यसको बोट ५ फिट देखी १० फिट सम्म अग्लो हुन्छ । यसएलाई मसलाको रानी पनि भनिन्छ । यसले खेती गरेको २ देखी ३ बर्षबाट उत्पादन दिन थाल्दछ । अलैंची खेती हुने ठाउँमा यसको मज्जाले खेती गर्न सकिन्छ । खेती प्रविधि : समुन्द्र सतहबाट ६०० मिटर देखी १७०० मिटरसम्म यसको […]